Professional iPhone Photo Abaabulaha ay isu Abaabula Photos on iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo abaabulo Photos on iPhone (6s iPhone mid)
"Waxaan jeclahay in la isticmaalo aan iPhone sida kamarad si sawirro loo qaado, gaar ahaan qaadashada sawirada wiilkayga. IPhone waxay kuu sahlaysaa ii meel sawirada in ay qaataan waqti kasta. Waa wax weyn. Si kastaba ha ahaatee, ka dib kala duwan oo ka mid ah sawirada buuxiyeen duudduubnaa camera , oo innaba iyaga ma heli karaa si lacag la'aan ah ilaa meel. Ma jiraan wax qabanqaabiyaha iPhone sawir inuu ii ogolaado inaan maareeyo kuwaas PIC. "
iPhone runtii waa camera wanaagsan in la sawiro qaado. Si kastaba ha ahaatee, Lugood ma bixiyaan caawinaad ah si ay u abaabulaan photos on iPhone. Waxa kaliya syncs sawiro ka computer si iPhone. Xaaladdan oo kale, si ay u abaabulaan photos on iPhone, waxaad isku daydaa inaad iPhone sawir qabanqaabiyaha app xirfad leh. In this article, waxaan kuu soo jeedinaynaa in ay isku dayaan TunesGo Wondershare . Waxa ay halkaas Lugood dhaco gaaban - abaabulka photos ee iPhone.
Download ku iPhone Photo Abaabulaha app ugu fiican si ay u arkaan in ay tahay wanaagsan ama aan!
Fiiro gaar ah: Labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) versions maxkamad la soo bixi karaa halkan. In socda, aan ka hadlo sida loo isticmaalo Wondershare TunesGo (Windows) - Photo Abaabulaha iPhone in uu abaabulo photos on iPhone.
Talaabooyinka ay u isticmaalaan qabanqaabiyaha ugu wanaagsan ee sawir u ah iPhone
Tallaabada 1. Connect iPhone la PC
Isticmaal iPhone USB cable in ay ku xidhmaan iPhone la PC. Download, rakibi, iyo abuurtaan qabanqaabiyaha sawir u iPhone (TunesGo Wondershare) ah. TunesGo aqoonsan doonaa iPhone oo muujiyaan furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan la isticmaalayo TunesGo, fadlan soo dajiyo Lugood aad kombuutarka hore.
Tallaabada 2. Isticmaal iPhone Photo Abaabulaha in uu abaabulo photos iPhone
Riix Photos dhinaca midig ee suuqa. Ka dibna waxaad arki kartaa Roll Camera, Photo Library, iyo albums sawir. Hadda ayaad u habayn kartaa sawiro iPhone kuwan.
Guji "Roll Camera" ama "Photo Library"> photos dooro> Riix "Delete" in ay tirtirto photos iPhone ama guji "Dhoofinta in" dhoofinta photos iPhone in computer.
Xaq-riix album sawir, oo aad magaca kartaa ama u tirtirto.
Midig u guji "Photo Library" in ay doortaan "New Album", waxaad samayn kartaa album a photo cusub.
Daawo Video si ay u bartaan sidii loo abaabuli Photos on iPhone ah
Isku day Wondershare TunesGo - iPhone Photo Abaabulaha.
Xalka ugu wanaagsan ee jailbroken iPhone / iPad in Hagaaji in macruufka 9
Dhibaatooyinka Major la iPhone 6 iyo sida loo dayactir
10 Common iPhone Software Dhibaatooyinka